TIGNOOLOJIINKA SII KORDHAYA EE HARUURKA HADHUUDHKA: XEERARKA BEERISTA IYO DARYEELKA - DALAGYADA
Ugu Weyn Ee Dalagyada
Talooyinka beeritaanka iyo hadhuudhka hadhuudhka ah
Midho masaggo ah - Mid ka mid ah badarka qadiimiga ah, quudinta iyo dalagyada cuntada, taas oo si guud loo yaqaan sida cuntada xayawaanka dufan leh. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, cawsku wuxuu helay sumcad weyn oo ka mid ah taageerayaasha nafaqada habboon ee nafaqada iyo nafaqada, kuwaas oo ku talinaya in masaggada lagu daro cuntada si ay u daawadaan miisaankooda. Xaqiiqdu waxay tahay in qamadiga iyo badarka kale ee ka mid ah borotiinka gaarka ah, gluten, taas oo keeni karta xasaasiyad, waxay hor istaagtaa dheef-shiid kiimikaadka iyo kor u qaadidda koritaanka kaydka dufanka ee unugyada. Hase yeeshee hadhuudhku wuxuu ka kooban yahay qadar yar oo ah gluten iyo fibreerooyin badan, sidaas awgeed firileyda ayaa noqotey saldhig cunto caafimaad leh oo adduunka oo dhan ah waxaana lagu koray dhammaan waddammada cirqiga dhexe.
Ku dhaji wareegga
Deeq bixiyayaasha masaggada waxaa lagu qiimeyn karaa saddex tilmaamood. Gaar ahaan marka la eego kaydka qoyaanka ee ciidda - xilliga qaboobaha; qashinka - miro iyo xididdoiyo iyadoo la isticmaalayo hadhaaga dalagga - guga guga, sarreenka xilliga qaboobaha, dabocase calafka. Sidaa daraadeed, kuwii horay u soo maray waxay u socdaan si:
baradka guga iyo hadhuudhka;
Corn - sidoo kale horaantii saxda ah ee masaggada, maadaama ay ka baxayso qoyaanka iyo nafaqooyinka, taas oo ka caawisa koritaanka iyo horumarinta hadhuudhka hadhuudhka. Maqnaanshaha hadhuudhka ee kiiskan waa xad-dhaaf ah dalagga dalagga, taas oo adkeyneysa in lagu beero ciidda ka hor beerashada iyo daryeel dheeraad ah. Sidaa darteed, haddii hadhuudh loo isticmaalo sida barxad, ka dibna inta lagu jiro xilliga dayrta ee dareenka gaarka ah waa in la bixiyaa si loo siman yahay ciidda iyo beeritaanka dalagga dalagga. Sunflower waxay sidoo kale noqon kartaa mid horay u ah, laakiin marka la isticmaalo, waa lagama maarmaan in la fuliyo burburinta geedo of dhibicda.
Waxaa jira siyaabaha soo socda ee isbeddelka dalagyada dalagga dalagga beeraha:
Sarreenka xilliga qaboobaha;
Corn (galley) + hadhuudh oo ah ½;
Corn for silage;
Bacriminta xilliga guga;
Ma taqaanaa? Nidaamka way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran shuruudaha wax soo saarka. Xaaladda kaliya ee joogtada ah: ka dib masaggada, dalagyada guga oo keliya ayaa loo baahan yahay in la beero.
Ciidda hadhuudhka ah
Nidaamka teknoolojiga ee beeritaanka masaggada ayaa waxaa loogu talagalay dhowr waxqabadyo diyaar garow ah ee ciidda: burburinta haramaha, dusha sare iyo qoyaanka ciidda. Masagada ciidda ma aha mid aad u culus, xajmiga culus ee culus, iyo kuwa cusbaynaya. Sida ugu guulaha badan ee haruurka hadhuudhku waa dabacsan yahay, qoyan, si fiican u kulul iyo ciidda. Beerashada intaan la beeri Karin waa inay ka kooban tahay burburinta ciidda guga hore iyo hal ama laba shuban.
Masagada - dhaqan ah oo u baahan dalagyo, inkastoo ay awood u leedahay inay si madaxbanaan u soo saaraan batariyaal ka soo ciidda. Warshadu waxay si wanaagsan uga jawaabtaa Bacriminta macdanta iyo Bacriminta waxayna ku baabi'isaa dhaqaale ahaan.
Masaggada waxay u baahan tahay laba jeer, ama xitaa saddex jeer ka yar nitrogen, fosfooraska iyo potassium marka loo barbar dhigo hadhuudhka. Nitrogar ayaa lagama maarmaan u ah dhaqanka koritaanka xoogga leh iyo kordhinta aagga dusha sare, sidaas darteed, si aad u hesho dalag fiican, waxaad u baahan tahay inaad samayso qiyaaso badan oo nitrogen ah. Fosfooraska ayaa sidoo kale muhiim u ah nolosha hadhuudhka hadhuudhka, qaddarkeeda waa inay ahaataa hal iyo badh ilaa laba jeer ka yar nitrogen, qiyaastii 90-100 kg / ha waraabinta. Potassium wuxuu ka caawiyaa raasamaalka sonkorta ee hadhuudhka.
Iyadoo dhalid dalagga yar yar (illaa 5 tii halkii 1 ha), hadhuudhku wuxuu isticmaalaa potassium-ka ciidda, sidaas awgeed isaga laftiisa ayaa iska leh macdantaas. Haddii dhalidda masaggadu tahay qiyaastii 7-10 tan halkii 1 ha, waxaa jira yaraanta potassium, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto isku darka Bacriminta kale ee qiyaasta 40-60 kg halkii hektar.
Waxaa haboon in la xusuusto in Bacriminta nitrogen, marka lagu dabaqo Bacriminta fosfate, waxay leeyihiin saamayn taban ah biqilka abuur. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad sameyso bacriminta gudaha iyo kuwa qoto dheer ee abuurka. Haddii bacriminta loo isticmaalo habkan, dhalidda ayaa kordhin doonta 3-3.5 jeer marka bacriminta buuxda loo dalbado beerta. Masagada ayaa sidoo kale jecel Bacriminta organic, sida digada, at heerka of 10-20 ton oo hektar ah. Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo xilliga dayrta marka diyaarinta ciidda iyo guga, taas oo ka dhigaysa meel ka soo miraha, degaanka iyo ka qoto dheer beerashada.
Waa muhiim! Ha ka badin qiyaasta lagu taliyey ee Bacriminta nitrogen, waxay ka qaybqaadataa isku dhafka walxaha sunta sunta ah ee masska masaggada, taas oo khatar ah marka beerashada dalagyada cagaarka cagaaran.
Xulashada noocyo iyo dhar daabacan
Waxaa jira dhawr fursadood oo lagu kala saaro hadhuudhka., iyada oo ku saleysan ujeedada kala duwan ee kala duwan ee firileyda ee dhaqanka. Beerta ugu caansan ee saddexda nooc ee ugu waaweyn ee hadhuudhka: hadhuudhka, sonkorta iyo burka. Nooca ugu dambeeya waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka burushyada iyo burka, iyo masagada sonkorta - ujeedooyinka quudinta iyo helitaanka burooyinka laga soo qaado afkoda.
Hadhuudhka waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee laga beero miraha. Heerkoodu wuxuu ka kooban yahay nus mitir ilaa hal iyo badh, hadhuudhuna way wareegsan yihiin, wayna fududaanayaan. Ka mid ah noocyada hadhuudhka ee leh dhalidda sare, iska caabida qabowga iyo iska caabbinta abaarta, emit Genichesky 11, Horizon, Krymdar 10, Saturn, Kuban Red 1677, Orange 450, Cactus, Odessa 205, iyo sidoo kale Stepnoy 5 Beelaha, Rossorg 4 iyo Zernograd 8.
Muddo dhowr toddobaad ah, miraha hadhuudhka ah ayaa loo diyaarinayaa beeridda.. Waxay udhigmeen si looga fogaado jabinta cudurada fungal iyo bakteeriyada iyo in la burburiyo microflora gudaha, taas oo si xun u saameeysa koritaanka. Waxaa wanaagsan in la isticmaalo daweynaha la isku daro, sida "Fentiuram" ("TMTD" 40% + troplorophenolate copper 10% + gamma isomer GHTSG15%), waxay ka shaqeeyaan lafdhabida kali.
Maanta, waxaa jira daawooyin guud oo suurta galiya in lagu daaweeyo miraha leh hab qallalan oo qallalan. Dharka noocan oo kale ah, 5-10 l oo biyo ah + walxo isku dhafan 1.5-2 kg + dhalada laysku qurxiyo 150 g waxaa loo qaadaa 1 tan oo miraha ah, waa muhiim in la xasuusto in qashinka qallalan ee semi-qallalan ee nuxurka qoyaanka ee abuurku uu kordho ilaa 1%.
Ma taqaanaa? Daraasado cilmi-baaris ah ayaa muujiyay in dharka ubaxa ee noocyada Casan ee casaanka 1677 iyo Orange 450 lix bilood ka hor beerashada kordhaya biqilka 45 illaa 68%.
Waqtiga ugu wanaagsan ee beeritaanka masagada
Muddada beeritaanka ku habboon waa marka heerkulka maalinlaha ah ee tobanka mitir ee qoto dheer ee ciidda uu yahay + 14 ... +16 ° C. Iyadoo beeridda hore, geedo yihiin dhif iyo qaris oo leh haramaha. At heerkulka ciidda si fiican, geedo ka muuqan doonaa maalinta 10-14aad ka dib markii beero, iyo haddii heerkulku u kaco si + 25 ... +28 ° S, - maalinta 5-6aad.
Waa muhiim! Si adag looma talineynin hadhuudhka koraya ee abuurka guga horraanta. Marka lagu beeray ciidda qabow, abuurka ma biqin iyo kallana.
Habka abuurka hadhuudhka
Waxaa ka mid ah hadhuudhka hadhuudhka dalagga geedka ugu yar, inkastoo xaqiiqda ah in Beelaha iyo noocyada ay aad u kala duwan yihiin tiro badan oo ah miraha. Iyada oo u janjeedha masagada si qoyaan leh, aad u baahan tahay inaad tixgeliso miisaanka qiyaasta miisaanka, taas oo lagu xisaabiyo ballaca u dhexeeya safarka iyo cufnaanta dhirta hektar. Heerka beereed ee qiyaastii 160-170,000 dhirta halkii 1 ha ayaa lagula talinayaa. Celcelis ahaan, waa 10-14 kg halkii hektar.
Xisaabinta qiimaha masagada, waa in la tixgeliyaa biqilka beeraha ee abuurka. Seeds of Beelaha casriga ah ee tayada wanaagsan waxay leeyihiin biqilka shaybaarka sare (laga bilaabo 82% ilaa 95%), laakiin isbarbar dheelitirka hoose - 12-19%.
Abuuri karaa abuurka u baahan tahay ciid qoyan, halka aan si qoto dheer u dillaacin. Sababta oo ah hadhuudhku waa dal dalag yar yar, oo leh qashin qoto dheer ah xilliga biibiinka ayaa kor u kici doona, dhirtu waxay u muuqan doontaa daciif ah mana u adkeysanayso cimilada. Qodobka ugu fiicani waa 7 cm. Marka lakabka sare ee ciidda la qalajiyo, waxaa suurtogal ah in la soo geliyo ilaa 10-12 cm, oo leh silsilado lagu duubay ka dib beerista. Haddii kaliya ka hor inta aadan beerin roobab culus, waxaad u oggolaan kartaa qoto dheer 4 cm, qoto dheerina waa mid la aqbali karo oo dhul la waraabiyey.
Cunto sarre leh oo masaggo ah ayaa laga helaa iyadoo la eegayo xajmiga yar ee safka u dhaxeeya safafka - 60 iyo 45 cm. Yaraynta xajmiga u dhexeeya safafka leh cufnaanta isla waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhirta si siman u qaybisid safafka, waxay u fiicantahay in la siiyo cunto iyo korodhka dhalmada.
Xannaanada beeraha hadhuudhka ah
Tiknoolajiyada beerista hadhuudhka ah waxaa ka mid ah waxqabadyo isdaba jooga ah Ka hor beerashada - Gawaarida layskaga duubay, ka dib markii burooyinka ay ka soo baxeen ciidda waxay ka dhigaan lakabka mulch. Ka dib 5 maalmood ka dib beerashada, ka hor soo bixitaanka haruurka masaggada leh harraadyada dhexdhexaadka ah ayaa loo sameeyaa si loo burburiyo haramaha.
Haddii ka dib beerashada qabowgu mar kale ayuu soo noqdey, masaggada maalinta 10-aadna aysan gaarin wax ka badan 2-3 cm, waa in lagu celiyo harraadinta. Hannaanka ugu horreeya ee noocan ah, cawska ayaa lagu burburiyaa 60%, iyo kan labaad - ka dib 85%. Waqti go'an oo qotodheer ah ayaa badalaya hal beerashada.
Xilliga roobabku sii dheeraanayaan, foomamka qolof ah ee dusha sare ee dhulka, waa in la burburiyaa waqtiga, sababtoo ah waxay ka hortagtaa horumarinta geedo. Ka hor inta aan la soo saarin sprouts, qolofka ayaa la burburin karaa burburinta, laakiin haddii la abuuro inta lagu jiro muddada biqilka, markaa waa in la baabi'iyo kabaha wareegsan ee kor u kaca (ilaa 9 km / h). Daryeel dheeraad ah waxay ka kooban tahay kobcinta beeraha isku dhex jira, kuwaas oo sidoo kale bacrimiya waqti isku mid ah. Uga soo bixiddu waxay ka caawisaa ka saarida caws, daboolka nidaamka xididka leh oksijiin, oo hayn qoyaan ka hor ubax iyo Bisaylkiisa abuurka.
Horumarku wuxuu bilaabmaa sida ugu dhakhsaha badan marka safafka masaggada si cad loo arki karo. Qodobka ugu sareeya ee daaweynta waa in uu ahaado 10-12 cm, xigta waxaa lagu fuliyaa 2-3 toddobaad iyadoo leh qoto dheer oo ah 8-10 cm, iyo saddexaad - dhowr toddobaad kadib markii labaad ee qoto dheer oo ah 6-8 cm.
Waa muhiim! Marka la sameynayo daaweynta isku-dhex-dhexaad ah oo la socdo beeraley, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo ballaca aagga ilaalinta 10-12 cm.
Xakamaynta cayayaanka iyo ilaalinta cudurka iyo cayayaanka
Haramaha ugu waxyeellada badan masaggada - kuwani waa burooyin, kuwaas oo ka dhigaya 90-95% miisaanka guud ee haramaha. Waxaa si sahlan loo burburiyaa masagada haruurka ee wejiga biqilka. Ka dib markii biqilka iyo rootingka, waxay u noqdaan kuwo u adkaysta cirridka iyo geedo gaar ah. Waxaad ku baabbi'in kartaa "Agritox" (0.7-1.7 kg halkii hektar), "2.4 D" (0.5-1 kg halkii hektar), "2M-4X" (0.5-1.1 kg hal hektar).
Masagada miraha waxay ku faafi kartaa cayayaanka sida aphid, aboorka, aboorka caddaanka, wireworms, iyo ilaalada xayawaanka. Cayayaankaasi waxay keenaan waxyeelo aan la goyn karin dalagyada iyagoo cunaya caleemaha caleemaha, saxarada caleenka ah, jirridda, iyo badarka. Si loola dagaallamo cayayaanka, waa lagama maarmaan in la fuliyo daaweynta loo yaqaan "Operkot" (0.16 kg hektar) iyo cayayaanka cayayaanka ah ee Zenit (0.2 l hektar hektar). Inta lagu jiro dhalmada mass ee cayayaanka dirxiga - buufin daroogada "Bi-58".
Haddii miraha dhowr ah laga helo hal warshad, ku celceli inaad ku buufisid ka dib 15 cisho oo la socda diyaarinta nafleyda "Hapelin" (0.8-1.0 kg halkii hektar), Dendrobatsillin (0.5-1.0 kg halkii hektar), iyo Lepidocide ( 1.5-2.0 kg halkii hektar). Cudurka masagada ayaa ugu badan soo ifbaxay dhibcaha caleenta, dhuunta, miraha, miraha caleemaha, gelmintosporiozu, fusarium iyo alternariosis, kaas oo yareeya dalagga.
Si looga hortago tan, waa lagama maarmaan in la burburiyo hadhuudhka waqtigii loo baahnaa, ka saari lahaayeen dhulka waxyeellada leh, beerida ciidda, pickle miraha, iyo dalbo digirta iyo Bacriminta fosfateerka, maadaama ayan suurtagal ahayn in la koro dalag fiican oo masaggo ah iyada oo aan u hoggaansamin tallaabooyinkan adag.
Hadhuudhka hadhuudhka ah sida caadiga ah looma maydhin, waa la goostay marka hadhuudhku si buuxda u bislaaday. Isla mar ahaantaana ka hor nadiifinta qeexaan qoyaanka. Tilmaamaha masaggada ayaa ah in hadhuudhku badanaa ku soo baxaan baqshiish, marka tiro dhan cagaaran ay weli cagaaran tahay oo ay ku jirto qoyaan qoyan oo ah 60%, iyo afkuna waa 70%. Qoyaanka qoyaanka ee hadhuudhku waa inay noqdaan 25-30%, markaa waxaad bilaabi kartaa nadiifinta.
Goynta goosashada tooska ah iyadoo la isticmaalayo mashiinnada goosashada. Si looga fogaado in hadhuudhka la gooyo inta lagu jiro maadada, xawaaruhu wuxuu yareeyaa 500-600 daqiiqadii. Si aad u hesho hadhuudh qallalan, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo nadiifin gooni ah, khaasatan xilliyada firaaqada hore. Madaxa ZHN-6 ayaa loo isticmaalaa, kaas oo xajiya culeys yar oo jaran (ilaa 15 cm) oo isku duubnaadaan.
Laba toddobaad ka dib marka hadhuudhka iyo cagaarka la qalajiyo duubka, tikidhka waxaa lagu fuliyaa isku darka. Masagada cagaaran ayaa la goostay halka qoryaha la tuuro, oo la jarayo 10-12 cm.
Waa muhiim! Cabbitaanka cagaaran ee la uruuriyey waa in la quudiyaa ka dib afar saacadood oo duufaan ah si looga hortago sumo macquul ah walxaha siyanida.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dalagyada 2019